🥇 ▷ Apple wuxuu soo saaray casriyeynta Mac aamusnaanta si loo hagaajiyo nuglaanta kaamerada… ✅
Apple wuxuu soo saaray casriyeynta Mac aamusnaanta si loo hagaajiyo nuglaanta kaamerada…
Apple waxay siidaayay cusbooneysiin cusub oo aamusnaan ah oo loogu talagalay Mac inuu wax ka qabto burburka Zoom ee u oggolaaday kuwa xad-gudbaya inay afduubtaan websaydhka Mac. Sida laga soo xigtay TechCrunch, Apple waxay dhiirrigelisay cusboonaysiinta si otomaatig ah looga saaro waxyaabaha nugul ee ay isticmaaleyaasha websaydhadu u adeegsanayaan inay ku habeeyaan marin u helka barnaamijyada shirarka fiidiyowga; Soo dhaweyn markaad rakibayso.
Cusbooneysiinta looma baahna sababta oo ah dalabka ayaa cusbooneysiiyay, laakiin tani waxay hubineysaa in dadka socodsiinaya qeyboodii hore ee Zoom aysan u nugul sidii hore. Marka la eego cusbooneysiinta cusub, Zoom waxay iskaashi la yeelatay Apple, kaas oo si otomaatig ah loo adeegsan karo iyadoon loo baahan is-dhexgal dheeri ah oo isticmaale.
In kasta oo Zoon uu si rasmi ah u sii daayay Talaadada Apple wuxuu sheeganayaa in ficilladiisu aysan kaliya ka badbaadin doonin isticmaaleyaasha waqtigan xaadirka ah laakiin sidoo kale wixii la soo dhaafay oo aan saameyn ku yeelanaynin ama carqaladeynaynin shaqeynta dalabka Zoom.
tani maahan markii ugu horreysay oo Apple ay soo bandhigto casriyeynno aamusnaan ah oo loogu talagalay Mac, laakiin marar dhif ah Apple waxay ka qaaddaa ficil dadweyne barnaamijyada loo yaqaan ama caan ah. Shirkadda waxay dooneysaa inay ka difaacdo isticmaaleyaasheeda nuglaanta ay isticmaalayaashu la kulmaan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka wada shaqeyno Apple si aan u tijaabino cusboonaysiintaan. Waxaan rajeyneynaa in dhibaatada serverka webka maanta la xallin doono. Waxaan ka mahadcelineynaa dulqaadka isticmaaleyaasheena iyadoo aan sii wadno inaan ka shaqeyno sidii aan u xallin lahayn arrimahooda – Priscilla McCarthy, oo ah afhayeenka Zoom
Waqtiga xaadirka ah, Zoom wuxuu leeyahay 750,000 adeegsadayaal adduunka oo dhan u adeegsada barnaamijkan wadahadalka fiidiyowga.